यूएएएको परिषद् बैठकमा टानको सहभागिता | .:: Welcome || Paryatannews
Home » :: हाईलाइट समाचार » यूएएएको परिषद् बैठकमा टानको सहभागिता
यूएएएको परिषद् बैठकमा टानको सहभागिता
पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । आजबाट सुरु भएको युनियएन अफ् एसिएन अल्पाइन एसोसिएशन (यूएएए)को परिषद् बैठक आजबाट सुरु भएको छ ।
मंगोलियाको राजधानी उलनबटरमा मे ३० देखि जुन ४ सम्म हुने सो बैठकमा टानले अब्जरभर मेम्बरको रुपमा सहभागिता जनाएको हो । दुई वर्ष अघि यूएएएको सदस्य बनेको टानले अर्को वर्ष मात्र फूलमेम्बरको हैसियत पाउनेछ । टानको तर्फबाट संघका द्वितीय उपाध्यक्ष तथा इभेन्ट कोअर्डिनेटर रामप्रसाद सापकोटाले सहभागिता जनाएका छन् ।
पर्वतीय पर्यटन र शाहसिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि एसियाली देशहरुबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान र प्रबद्र्धनका लागि यो बैठक महत्वपूर्ण रहन्छ । टानले नेपालमा पर्वतीय पर्यटन प्रबद्र्धन र पर्वतीय पदमार्गहरुको विकासका लागि आफ्नो भनाइ राख्ने गरि तयारी गरेको छ । बैठकमा सहभागि भएका सापकोटाले यो बैठकले टानलाई फूलमेम्बर दिनको लागि र पर्वतीय पर्यटन पदमार्ग निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले नेपाल प्रबद्र्धन गर्ने विभिन्न खालका प्रचारसामग्रीसहित आफू बैठकमा उपस्थित भएकोले नेपालको थप प्रचारप्रसारमा पनि सहयोग पुग्ने बताए ।
यूएएएमा जापानदेखि इरानसम्मका राष्ट्रहरुको सहभागिता रहेको छ । नेपालजस्तो सम्भावना रहेको तर विकास र प्रबद्र्धनमा पछि परेको देशका लागि यस्तो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने भएकोले टानले अब हरेक वर्ष यस्ता कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकबहादुर महतले बताए । सो कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण संघको प्रतिनिधि पनि सहभागि भएका छन् ।
यूएएएको परिषद् बैठकमा टानको सहभागिता Reviewed by Shiva Shrestha on May 30 . पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । आजबाट सुरु भएको युनियएन अफ् एसिएन अल्पाइन एसोसिएशन (यूएएए)को परिषद् बैठक आजबाट सुरु भएको छ । मंगोलियाको राजधानी उलनबटरमा मे ३० देखि जुन पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । आजबाट सुरु भएको युनियएन अफ् एसिएन अल्पाइन एसोसिएशन (यूएएए)को परिषद् बैठक आजबाट सुरु भएको छ । मंगोलियाको राजधानी उलनबटरमा मे ३० देखि जुन Rating: 0